Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo xaflado Easter in Europe kala duwan ee dalka in ay dalka oo magaalo ilaa magaalo. Waa mid ka mid ah ciidaha ugu weyn oo ugu da'da weyn ee Church Christian ah. Easter waa dabaal sarakicidda Ciise Masiix oo xabaashii laga. The celebration date for Easter…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Waa run in ay jiraan wax ka badan hal hab si ay u gaaraan Amsterdam ka Paris. Oo intii kulligood waxay ay pro iyo khasaaraha ka iman, safarka ka Paris si ay u Amsterdam tareen weli ikhtiyaarka ugu fiican marka aad is bar bar dhigo ee. We give you all the reasons…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Tareenadu waa sida ugu fiican ee ay u safraan dalka Talyaaniga iyadoo aan loo eegin xilli. Si kastaba ha ahaatee, waxay muujinayaan in ay fursad u ammaan iyo raaxo badan, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Winter safarka tareenka ee Italy ammaan ma aha oo kaliya, laakiin waxa ay sidoo kale si degdeg ah oo hufan. This article was…